अब के हुन्छ मेलम्ची ? सिएमसीसँगको ठेक्का तोडियो - NepalDut NepalDut
अब के हुन्छ मेलम्ची ? सिएमसीसँगको ठेक्का तोडियो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी (सिएमसी) सँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । बुधबार सिंगापुरमा भएको वार्ता सकारात्मक नभएपछि विहिबार बसेको आयोजना बोर्डको बैठकले सीएमसीसँगको ठेक्का तोडिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।
काम पूरा नगरी हिँडेको सीएमसीलाई जवाफ पेश गर्न यहि माघ ६ गते १४ दिनको समय दिइएको तर कम्पनीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र पटक पटकका वार्तामा गैरजिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत भएकाले ठेक्का सम्झौता तोडिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।
सीएमसीसँगको ठेक्का तोडिएसँगै मेलम्ची आयोजना थप संकटमा परेको छ । सरकारले बाँकी काम नेपाली सेनाबाट गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
सिएमसीले ठेक्का छोडेर भाग्ने संकेत पाएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पुस २ गते नै सिएमसीको अढाइ अर्ब धरौटी रोक्का गर्न स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । टाट पल्टिएको भनिएको उक्त कम्पनीका कर्मचारी मेलम्ची खानेपानीको काम अधुरो राखेर भाग्न खोजेपछि समितिले धरौटी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
अब मेलम्ची के हुन्छ ?
सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्धभएपछि कानुनतः नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मेलम्चीको सुरूङ ढलान एक किलोमिटर बाँकी छ भने कंक्रिट लाइनिङको काम ९६० मिटर बाँकी रहेको छ। त्यस्तै इन्टेकको काम र हाइड्रो मेकानिकल गेट बन्द गर्ने काम सम्पन्न भएको छैन । रहेका काम सम्पन्न गर्न कम्तिमा ४ देखि ५ महिना लाग्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउछन् ।
सिएमसी भाग्ने प्रकरण सुरु भएपछि खानेपानी मन्त्रालयले नेपाली सेनाको सहयोग लिएर योजनाको बाँकी काम पुरा गर्ने विकल्पमा छलफल भएपनि अहिलेसम्म सिएमसीसँगको कुराकानीलाई नै प्राथमिकता दिइएको थियो । तर अब ठेक्का तोड्ने निर्णयपछि सरकारले यो विकल्पमा छिट्टै निर्णय लिने सम्भावना देखिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००१ बाटै सुरू भएको हो। सुरूमा यो आयोजना सन् २००७ मा सकिन्छ भनिएको थियो। सन् २००८ सम्ममा सुरूङ निर्माण क्षेत्रमा बाटो पुर्‍याइएको थियो।
सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको लिएको भएपनि चिनियाँ कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई आयोजनाको बाँकी कामको जिम्मा लगाएको थियो।
यता, सिएमसीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको पनि ठेक्का लिएको छ । सो ठेक्का उसले २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाखमा पाएको छ। १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रोपावर गत असोज १५ मा सिएमसीसँग सम्झौता भएको हो । सिएमसी मेलम्चीबाट भागेसँगै तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।